ULinks uxwayiswa ngodumo lokudlala kwiBafana Bafana
UGIFT Links owelulekwe umqeqeshi wakhe uBenni McCarthy ukuthi ukudlala kwiBafana Bafana kungamvuvukalisi ngekhanda Isithombe: BACKPAGEPIX
MALIBONGWE MDLETSHE | October 14, 2018
U-2018 ngunyaka isikhwishikhwishi somdlali wasezimpondweni wompetha beMTN8, iCape Town City, uGift Links, angasoze awukhohlwa.
NgoJanuwari ushiye iPlatinum Stars athuthukiswe kuyo. Uthengwe yiqembu lase-Egypt iPyramids FC. Ubelithola ijezi e-Egypt kodwa washiya ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ngoba iqembu selidayiswe eSaudi Arabia.
Ubeyinyama kodwa waziqokela yena ukusayina kwiCity ngoba efuna uBenni McCarthy amsize amlungiselele ukuyodlala phesheya.
Ungene emabhukwini omlando kwiCity eba ngumdlali obiza ukubedlula bonke asebeke bathengwa yileli qembu elibalwa nangagodoli nemali kwi-Absa Premiership.
Kuwo belu u-2018 udlalele okokuqala kwiBafana ngokuboshelwa esikwatini esisale nepuleti kwi-2018 Cosafa Cup ePolokwane.
Kudlule izinyangana wanqoba iMTN8 njengoba esesethubeni lokusiza iBafana ingene kwi-2019 Africa Cup of Nations eCameroon ngoJanuwari.
Njengamanje uLinks (19) ungumdlali osemncane ukubedlula bonke ngeminyaka ekhempini yabadlali abangu-24 umqeqeshi uStuart Baxter okubhekwe amakule ngabo amaphuzu ayisithupha kwiSychelles emidlalweni yokuhlungela ukuya eCameroon.
ULinks ubizwe ngoLwesiththu ukuyovala isikhala sikaSibusiso vilakazi olimale iBafana ingcweka neSuperSport United.
Ngeke nokho kumangaze ukumbona enkundleni emdlalweni wanamuhla uma kubhekwa indlela adlale ngaye benqoba iMTN8 eThekwini ngoSepthemba 29. Umqeqeshi wakhe kwiCity, uBenni McCarthy, wavula isifuba ngezifiso zakhe ngalesi sibabuli sasePhokeng.
“UGift, ngimbona zonke izinsuku kuvele kungicacele ukuthi ufike la (kwiCity) esevele ekulungele ukudlala eqenjini elikhulu kodwa uneminyaka engu-19 ubudala.
“Angifuni ukuthi azithole esekhukhunyalelwa yikhanda engakafiki ezingeni lakhe eligcwele. Usanda kubuya ebholeni laseNingizimu Afrika kanti mhlawumbe akusafani nangesikhathi egcina ukudlala la ngaphambi kokuya e-Egypt.
“Mhlawumbe manje ibhola seliyashesha noma sekuhlukile ngandlela thize ebholeni laseMzansi. Izinga selithe ukujiya. Ngakho kusamele azinze, azithole, aziqonde ukuthi wukuphi lapho enamandla ngakhona noma lapho entekenteke ngakhona. Yilezo zinto esizisebenzayo naye zonke izinsuku,”kusho uMcCarthy.
UMcCarthy -odlale nazo zonke izinhlobo zabadlali emazweni anjengeNetherlands, Spain, Portugal nase-England- ufanisa uLinks esilomo saseGermany esisize iManchester City yanqoba iPremier League ngama-lengiso ngesizini eldule.
“Manje ngoba nimbona nje, sekuvele sekuyi-sikhathi soku-mkhulula, adlale ibhola. Uyayiqonda indawo yakhe nengiku-lindele kuye. Njalo uma ngikhu-luma naye ngivamise ukumenzela izibonelo ngoLeroy Sane weManchester City.
“Ngikholwa wukuthi bawuhlobo olufanayo. Udinga nje ukuthi athi ukubaqonda ngqo. Empeleni sekunamasonto engikhombisa ukuthi uyakwazi ukwenza lokho okudingeka ezingeni eliphezulu,” kusho uMcCarthy.